1. Ukulandelela iNgcaciso eMfutshane yeCandelo loLawulo lwezaBasebenzi 0009/2011 yomhla wesi-8 Disemba 2011 eyayimalunga neenkqubo zolawulo lwentsebenzo ezine eziphathelele kwiinkonzo zabaphathi abakhulu, kootitshala nakubaqeshwa benkonzo karhulumente, siqhoboshela apha ezi khalenda zonyaka zenkqubo yeSPMDS, PMDS ne-IQMS yango-2013.
2. Ezi khalenda zinika isikhokelo seenkqubo eziyimfuneko nemihla emiselweyo yokungeniswa kwazo.
3. Ulawulo lwentsebenzo yinkqubo eqhagamshelanisa izicwangciso zeziko neenjongo kwiinjongo zeeyunithi ezincinci (sub-unit goals) nakwimisebenzi ethile, yaye lujoliswe ekunikeni isikhokelo nasekuphuculeni intsebenzo yomntu ngamnye, ukuze kwandiswe ukusebenza ngokuyimpumelelo kwesebe namaziko emfundo.
4. Ulawulo lwentsebenzo oluqhubeka okokoko lunceda
ekumiseleni umoya wentsebenzo egqwesileyo;
ekuphuculeni ulwazi nokuqonda ngezo zinto uzilindeleyo;
ekukhuthazeni uvavanyo olunobulungisa nolungakheth' icala;
ekunikeni amathuba abhekiselele kwiimfuno zophuhliso;
ekulawuleni intsebenzo enganelisiyo ngokuthatha amanyathelo okuthintela ingxaki kwangoko;
ekukhokeleni nasekunikeni inkxaso abasebenzi; kunye
nokubonelela ngesiseko sezigqibo zethuba elizayo.
5. Kuluxanduva lwabo bobabini, umphathi wecandelo (isuphavayiza) nomqeshwa, ukuqinisekisa ukuba ikho imvumelwano yentsebenzo, ukuba iyimfuneko engumqathango ongaphambili (prerequisite) wesixhobo sentsebenzo esinoku-setyenziswa. Kunyanzelekile ukuba bonke abaphathi bamacandelo nabaqeshwa baqinisekise ukuba ukuhlolwa kwentsebenzo kwenziwa qho. Bonke abaqeshwa, nokuba baqeshwe isigxina okanye ngokwemvumelwano, baphantsi kohlolo lwentsebenzo, yaye ireyithingi nganye ebonisa intsebenzo mayisekelwe kubungqina.
6. Ukungaphumeleli kwabaphathi bamacandelo okanye kwabaqeshwa ukungenisa amaxwebhu ayimfuneko kunokubangela ukuba umqeshwa anganikwa uchatha womvuzo (pay progression) okanye ibhonasi yentsebenzo (kwimeko yabasebenzi benkonzo karhulumente). Ukuba umphathi wecandelo okanye umqeshwa ufunyaniswe engakukhathalelanga oku, isiphumo soko ingakukuba ohlwaywe lo mntu uchaphazelekayo.
7. Kuluxanduva lwabo bonke abaphathi bamacandelo nabaqeshwa ukuqinisekisa ukuba iirivyu nokuhlolwa kokugqibela kuqhutywa ngokwemigqaliselo emiselweyo kwisixhobo solawulo lwentsebenzo esisetyenziswayo. Kunyanzelekile ukuba kulandelwe ngqo imihla emiselweyo yokungeniswa kwamaxwebhu afunekayo. Ukungaphumeleli ukuhlangabezana nale mihla imisiweyo kuya kuba nesiphumo sokuba angafakwa uchatha kwimivuzo okanye ibhonasi yentsebenzo (kwimeko yabaqeshwa benkonzo karhulumente) kumqeshwa (baqeshwa) o chaphazelekayo.
8. Kucelwa wazise ngokuqulethwe kule ngcaciso imfutshane bonke abasebenzi abachaphazelekayo abaphantsi kweliso lakho.
ISAYINWE: NGU-PA VINJEVOLD
INTLOKO: YESEBE LEMFUNDO
IKHALENDA YOLAWULO LWE-SPMDS YENQANABA LOMVUZO 1-12 (ubukhulu: 30 KB)
IKHALENDA YESKIM SOLAWULO NOPHUHLISO LWENTSEBENZO (PMDS) YOOTITSHALA ABASEZI-OFISINI KA-2013/2014 (ubukhulu: 23 KB)
IKHALENDA YOKULAWULA I-IQMS YAMAZIKO EMFUNDO KA-2011 2013 (ubukhulu: 30 KB)